Amuma John Paul Jackson nke coronavirus na a zuru ụwa ọnụ ọrịa? | Apg29
Amuma John Paul Jackson nke coronavirus na a zuru ụwa ọnụ ọrịa?
Anyị na-na na ọtụtụ afọ n'ime gara aga ịhụ ihe yiri ihe anyị na-enwe ugbu a.
Salt Lake ebe ke United States nwere ndị ọzọ ụbọchị, ala ọma jijiji nke 5.7 n'ihe ọtụtụ Richter. Ọ natara mmụọ ozi nọ ọdụ n'elu ụlọ nke Mormon Church ida opì-ike nke aka ya.
Ihe anyị na-enwe ugbu a, paves ụzọ maka àmà na-egosi ndị a ma ama. Ee, i nwere ike na-eche na akpọrọ ihe nke oge, na ọ dị ka anyị bụ n'ezie na e nwere ugbu a, na mgbe Jizọs ga-nnọọ anya na-azụ.
Salt Lake ebe ke United States nwere ndị ọzọ ụbọchị, ala ọma jijiji nke 5.7 n'ihe ọtụtụ Richter. Ọ natara mmụọ ozi nọ ọdụ n'elu ụlọ nke Mormon Church ida opì-ike nke aka ya. Ọ fọrọ nke nta a amụma foto ihe anyị na-enwe ugbu a, ebe anyị na-enweta a shake na ya hà. Ihe niile nwere ike maa jijiji ga-maa jijiji, na ihe nile ọ na-enweghị n'elu Jehova ga-ada n'ala. The na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, okpukpe na aku usoro na anyị maara bụ banyere njedebe. N'oge na-adịghị anyị ga-ahụ na-esi n'ọchịchịrị pụtaghachi na ọgba aghara, a Setan na-emegide Kraịst usoro na Jehova ga-emesị agbaji ma na-ewetara ka ọ la n'iyì. Babylon ga-emecha merie na Chineke ikpe ziri ezi ga-ejupụta.
Anyị na-na na ọtụtụ afọ n'ime gara aga ịhụ ihe yiri ihe anyị na-enwe ugbu a. E wezụga niile oge odide na anyị na-na na na ya tupu ya, ya mere, nwere coronavirus jijiji ụwa anyị n'ụzọ mgbe anyị ga-ekwe omume. N'ihe na-erughị ọnwa atọ, ụwa agbanweela, ngwa ngwa na-enweghị aka ná ntị. Ọtụtụ ijeri mmadụ na-emetụta ọnọdụ, na ị pụrụ n'ezie na-ekwu okwu banyere a zuru ụwa ọnụ ọrịa, na a ewere ọsọ ọsọ gbalaga ọnọdụ na-eru ọ bụla Afrika. Ke Italy naanị gburu fọrọ nke nta ka 1,000 mmadụ na otu ụbọchị. Ihe kasị emenye ụjọ bụ na ọ dịghị onye maara otú ogologo ya ga-anọgide, ma ọ bụ mgbe ụwa na-aghọ dịtụ nkịtị ọzọ.
àmà na-egosi ma ama
Dị ka m dere tupu, n'ihi ya, ọ na-enye anyị ihe nghọta nke zuru ụwa ọnụ na ogbaaghara na a ga-emeri mgbe owuwe - na-atụghị anya ihe omume zuru ụwa ọnụ, edinam na a siri ike ọchịchị zuru ụwa ọnụ. Ihe anyị na-enwe ugbu a, paves ụzọ maka àmà na-egosi ndị a ma ama. Ee, i nwere ike na-eche na akpọrọ ihe nke oge, na ọ dị ka anyị bụ n'ezie na e nwere ugbu a, na mgbe Jizọs ga-nnọọ anya na-azụ.
Na-coronavirus buru amụma
Ọ bụ Michael Snyder, bụ onye nụrụ a Amụma si John Paul Jackson, a nwanna nwoke nke dị ugbu a n'ụlọ na Onyenwe anyị. John amuma nke "a nke abụọ" ọrịa nke ga-abịa, ma ọ bụ edoghị ma ọ bụ nke a nke bụ ọzọ. Jackson buru amụma ndị na-esonụ:
"Onyenwe anyi gwara m na a ga-a ọrịa, ma ndị mbụ ga-abụ obere ma ka egwu. Ma ndị ọzọ ga-esi oké njọ "